तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य ? जान्नुहोस् – Dainik Samchar
August 20, 2021 397
Prevपढन जापान पुगेका महेन्द्रनगरका कुवेर धामिको सुतेकै अवस्थामा मृ’त्यु !
Nextके कारणले गर्भावस्थामै शिशु तेस्रोलिङगी बन्छ ?
इजरायलले ५५ देशमा यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने